Raw Oxandrolone (Anavar) poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Raw Oxandrolone (Anavar) powder (53-39-4)
5.00 kupererwa ne 5 maererano ne 2 kasitoma ratings
Oxandrolone inogadzirwa, anabolic steroid hormone anogamuchirwa che testosterone. Uyu mujeri anogona kushandiswa kuti ave nestestrapial replacement therapy in hypogonadal varume, mune HIV-wasting syndrome, uye mune mamwe mamiriro ezvinhu kuitira kuti kuwedzerwa kwe nitrogen uye kusachena-muscle musasa.
Raw Oxandrolone (Anavar) powder (53-39-4) video
Raw Oxandrolone (Anavar) powder (53-39-4) Tsanangudzo
Raw Oxandrolone powder is steroid yakagadzirwa nevanhu, yakafanana nesterosterone inowanzoitika. Oxandrolone powder ndeye "anabolic" steroid inokurudzira kukura kwematumbu. Inoshandiswa kukubatsira kuti uwanezve uremu mushure mekuvhiyiwa, kushungurudzika kwakanyanya, kana zvirwere zvisingaperi. Rava Anavar powderpowder inoshandiswawo kune vanhu vasingagoni kuwana kana kuchengetedza hutano hwakanaka hwezvikonzero zvisingazivikanwi nezvehutano.Raw Oxandrolone powderis yaishandiswawo kuderedza kushungurudzika kwemasisita kunokonzerwa nekushandisa mishonga ye-steroid, uye kuderedza marwadzo emapfupa kune vanhu vane chirwere cheputika.
Rava Anavar powder inonzi steroid anabolic inoratidzirwa sechirongwa chekugadzirisa uremu mushure mekurasikirwa nekurema kwekutevera mushure mekuvhiyiwa kwakakura, zvirwere zvisingaperi, kana kushungurudzika kukuru, uye mune vamwe varwere vasina zvikonzero zvakasimba zvepathophysiologic zvinokundikana kuwana kana kuchengetedza uremu hunorema, kuregeredza proteine ​​catabolism inobatanidza nekurarama kwenguva yakareba ye corticosteroids, uye nokuda kwekununurwa kwemarwadzo emapfupa anowanzoenderana neasteoporosis. Anabolic steroids inogadzirwa nemaitiro e testosterone.
Raw Oxandrolone (Anavar) powder (53-39-4) Specifications
Product Name Raw Oxandrolone (Anavar) powder
Kemikari Name Anavar; Oxandrin; Protivar; Vasorome
muchiso Name Oxandrin, Anavar
Kirasi yeMishonga Androgen, Anabolic steroid
CAS Number 53-39-4
Molecular Wsere 306.44
Monoisotopic Mass 306.446 g / mol
Kunyorera Point 235-238 ° C
Biological Half-Life Vakuru: 9.4-10.4 maawa, Vakwegura: Maawa 13.3
ruvara Muchena kusvika kuforige yeupfu
Skukodzera 2 mg / mL (yakajeka sarudzo; inopisa)
Storage Temperature Zvinhu Zvinodzorwa, -20? C Freezer
APane Kuchengetedza kukwana kwakakwana kwekoriori nemaprotein muviri kuti uve nechokwadi chekuti nitrogen inofanana.
Chii chinonzi Raw Oxandrolone (Anavar) powder (53-39-4)?
Oxandrolone (53-39-4), inotengeswa pasi pemazita ezita rinonzi Oxandrin naAnavar, pakati pevamwe, inonzi anrogen uye anabolic steroid (AAS) mishonga inoshandiswa kubatsira kukurudzira kuwanda muzviitiko zvakasiyana, kubatsira kubvisa mapuroteni catabolism anokonzerwa ne kwenguva yakareba corticosteroid therapy, kutsigira kupora kubva kunopisa zvakanyanya, kurapa marwadzo emapfupa anosangana neasteoporosis, kubatsira mubatsiro revasikana vane Turner syndrome, uye nezvimwe zviratidzo.
Mafuta Oxandrolone (Anavar) Anogadzirwa Sei (53-39-4) mabasa
Munguva yekubatana kwema molecule, Anavar anoshandisa nekuisa kabhoni-2 neatomu yeOxygen sezvo yakagadziriswa. Chimiro chayo chinobatsira kuti chidzivirire kuputsika nemuviri kuitira kuti zvive zvinobudirira kune avo vanozvishandisa. Apo kushanduka kwechipiri kunopera, chegumi chegumi nechinomwe chinzvimbo chebhangi chinotenderera kunze kwekushanduka kwema molecular kuchiita kuti iiswe sean analicous steroid. Anavar anonyanya kusunga kune androgen receptors, uye izvi zvinoita kuti zvive nekwaniso yekupa rubatsiro rwekurapa. Kuvhara kune-androgen receptors kunobatsira kuti itishandise triiodothyronine hormone inowanikwa mumuviri.
Raw Oxandrolone (Anavar) powder (53-39-4) Dosage
Inofanira kutanga inonzwisisika kuti Anavar inowanzoiswa pamwe neine vanabolic steroid muhupenyu. Izvi zvinonyanya kubhadharwa nekuti vazhinji vanoona Anavar semunhu anine anabolic steroid, uye naizvozvo inoda kudiwa kweimwe yakasimba anabolic steroid inoshandiswa nayo. Nemhaka yeizvi, maawa aAnavar asati ataurwa anowanikwa nevanabolic steroid kushandiswa munharaunda kuitira chinangwa chekugadzirisa kushanda kwaive mune huwandu hwe15 - 25mg pazuva kwevatangi vekutanga. Zvisinei, mazuva aya, ane ruzivo rwemazuva ano uye ruzivo rwakanga ruripo, kutanga mazamu kunorudzirwa kuva zvishoma zvishoma sezvinopupurirwa nedzimwe zvidzidzo apo chirwere cheAnavar mumhando ye20 - 80mg pazuva chinodiwa kuti varwere veAIDS varambe uye vadzoke tsvina inopera . Nezvo izvi zvave zvichisimbiswa, zvakachengeteka kutaura kuti mutangi weAnavar muzamu anofanira kunge ari munharaunda ye30 - 50mg pazuva. Vatangadzi vanozivikanwa kuti vanowanzopindura zvakanyanya zviri nani kuderedza maitiro emakemikari akasiyana-siyana kudarika ivo vari pakati pevana analiclic steroid, kana vari mberi. Izvi ndizvo zvakanyanya kuitika pano, uye nesimba raAnavar riri iro rinodarika nguva 3 iyo yeTesttosterone, mutangi wekodzero anofanira kukwanisa kuwana pfuma yakawanda kubva pakurongwa kwakasarudzwa pamusoro. Mukatikati maAnavar madheji anowanzoenda muhuwandu hwe50 - 80 mg pazuva, uye vashandi vepamusoro vanowanzosimuka zvakanyanya kupfuura iyo yakarongeka, iyo nzvimbo yakakwirira yevanoshandiswa kare ichava 80 - 100mg pazuva. Kunyangwe, zvakakosha kuyeuka kuti tsanangudzo yepamusoro-soro anabolic steroid user (kana inouya kune chero anibolic steroid) haisi yepamusoro doses. Anavar inowanzoiswa pamwe nemamwe makemikari, sezvataurwa pamusoro apa. Izvo zvinowanzozivikanwawo nevashandi vazhinji vanoda kushandisa Anavar sevana vekutanga vanabolic mune chero upi zvake, apo Anavar madheji angasvika kumucheto wekumusoro kweimwe yezvikamu zvakapiwa apo mamwe maitiro anowedzera mucheka anochengeterwa pasi (seTesttosterone Replacement Therapy - TRT - desi re Testosterone).
Mukadzi Anavar Dosage
Anavar ndeimwe steroid yakadaro iyo inowanzoshandiswa pakati pevatambi vechikadzi, nokuda kwesimba rayo re-androgenic richienzaniswa neTesttosterone uye mamwe anabolic steroid. Kurwara kwechirwere hakuwanzoonekwi nekushandiswa kwemaawa akakodzera echikadzi Anavar. Zvinyorwa zvekutanga zvekurapa zvinorayira hazvitauri chero mazano akadai eAnavar mazano evakadzi. Zvisinei, pakati pevanhu vanoita zvemitambo uye yekuvaka muviri, chirongwa chinowanzoburudzirwa nechinangwa chekushanda nekugadzirisa muviri ndeyeiyo 5 - 10mg pazuva, iyo inomukadzi inofanira kubudisa simba rinodikanwa rakanaka uye hupenyu hunochinja nehuwandu huripo hwe androgenic virilization migumisiro. Zvinotarisirwa kuti vashandi vevakadzi vanoshandisa Anavar kwenguva isiri ye4 - 6 vhiki nekuda kwematambudziko anonzi androgenic anosangana naAnavar. Kunyange steroid yavanabolic yakanyanyisa seAnavar maererano ne androgenic nemigumisiro inogona uye inobereka virilization nemigumisiro iyo nguva yakawanda iyo yakawanda inoshandiswa.
Raw Oxandrolone (Anavar) powder (53-39-4) zvinobatsira
Kuwedzera kwehuwandu hwemisumbu
The Anavar steroid inotora bulking mukati mutsva pfupi pfupi yekushandiswa kwayo. Oxandrolone haisi inowanzogadzira chikamu chinonhuhwirira. Saka, kana ichipedza, iyo yakawanda inorema inoshandurwa kuva yakaonda musimba. Izvi zvinoreva kuti kunogona kunge kusina mvura yekuchengetedza mvura mumisungo apo uchishandisa Anavar. Iyo hormone inoshanda zvakasiyana kune mamwe maitiro ekuumba steroid akadai saAnadrol uye panzvimbo pacho inoumba mutsvuku. Kubudirira kweizvi ndechokuti mashoma akawanikwa paaishandisa Anavar zviri nyore kuchengetedza kupfuura izvo zvinowanikwa kuburikidza nekushandiswa kweimwe masimba masimba ekugadzira steroids. Saka zvakakodzera kune vanhu vanoda kuda kuteura mafuta uye panguva imwechete vanochengetedza maitiro akaoma.
Kunyange zvazvo izvi zvingave sevheno yevarume vanoda kuve nekunyanyisa kukuru, zvakagamuchirwa nevakadzi. Vazhinji vakadzi havadi kuve nekuputika kukuru sezvakaitwa nevarume, uye steroid iyi ndiyo nzira yakanakisisa yekuzadzisa chikumbiro chaunoda.
Anavar kazhinji anofananidzwa ne testosterone muvarume. Zvinoshamisa kuti inobatsira vakadzi kuwana hutendere hwakashata apo inongopa zvishoma zvishoma yekuvaka masimba kune varume. Vakadzi vanogona kuzvishandisa pasina kuchengetedzeka pasina kutya kwekukudziridza varume-sezvimiro.
Vanhu vazhinji vanoda kutapisa muviri wavo mafuta havasi vemuviri. Paunosangana nechinetso ichi, vanhu vazhinji vanosarudza kuongorora kudya kwavo uye kuita basa rakawanda rekuita kuti vapise mafuta. Zvisinei, izvi hazvirevi kutungamirira kutendeuka kwemuviri wemuviri kumasumbu. Anavar yakagadzirirwa kuuya uye kuwedzera ichi chiduku. Kuti kuderedza mafuta emuviri, mamwe maorikori anofanira kubviswa pane izvo zviri kuwedzerwa. Kudya kunobatsira mukuderedza mafungu emuviri, asi mukugadzirisa, imwe musimba inorasika saka ichipa mutumbi kutarisa kusingatarisirwi. Anavar anopa kukwanisa kubvumira mishonga kuti ichengetwe sezvo mafuta achibuda.
Uyezve, kushandisa steroid kunoita kuti muviri uve wakanyatsopisa mukupisa mafuta munguva pfupi. Mushandisi anotarisa zvakanatsanangurwa uye mishonga mushure mushandiswa kusiyana nemumwe asina kushandisa steroid anabolic.
Chinhu chikuru chinoita Anavar steroid inonyanya kufarirwa pakati pevarimi vemiti ndeyekuti inovabatsira kuti vateure mashoma, vachiri kuchengetedza masero akawanda. Zvisinei, haufaniri kutarisira mitezo yakadai pasina kudzidzisa muviri uye kudya kwakachena.
Mumitambo yakawanda, muviri mukuru wevanhu unogona kuratidza kuti inopesana nebasa romumwe munhu. Ndicho chikonzero nei Anavar anogamuchirwa se steroid yekubatsira nevatambi vakawanda sezvo inobatsira kuvandudza miviri yavo panguva imwe chete ichichengetedza muviri unodiwa. Kunyange zvazvo Anavar asina simba seimwe simba rekupa steroid dzakadai seHalotestin uye Dianabol, zvichiri kubatsira mukupa vatambi simba. Simba rinobatana ne-steroid rinogamuchirwa sezvo rinotungamirira kukuvandudza nekukurumidza uye simba panguva yekuita basa. Iyo mishonga inokonzera kusachengetwa kwemvura zvishoma sokudaro mutambi wacho haaiti pangozi kuve nehuwandu mukushandiswa kwekushandiswa. Zvose zvaunofanira kuziva nezveProviron yekuvaka muviri
Kuvandudza musumbu kupora
Anavar kushandisa kunotungamirira mukuvandudzika kwemitsipa yekutsungirira. Misumbu icharamba ichitsvaira kwenguva yakareba, uye naizvozvo munhu haazononoka nokukurumidza. Izvi zvinoita kuti steroid ive yakakodzera yemishonga inoshandiswa nevatambi vanoda kuwedzera zvibereko zvavo mukurovedza. Anavar anoita izvi zvose paanenge achivandudza dzimwe nzvimbo dzomuviri wako zvichiita kuti ive imwe yeiyo inoshanda uye ine ushamwari steroid yemazuva ano.
Tenga Oxandrolone (Anavar) powder kubva kuBuasas.com
Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive nezvaAnavar (Oxandrolone) yeMuvhuro
Doeker B, Muller-Michaels J, Andler W, kutengesa kwekukwegura kwekutanga mumukomana mushure mekurapwa naOxandrolone? Horm Res 1998; 50 (1): 46-8
Deming RH, DeSanti L., Oxandrolone, anabolic steroid, J Trauma 1997Jul; 43 (1): 47-51
Raw Oxymetholone (Anadrol) powder (434-07-1)
Raw Methandrostenolone (Dianabol) powder (72-63-9)
Raw 4-Chlorodehydromethyltestosterone powder (2446-23-3)
Raw Liothyronine Sodium (T3) powder (55-06-1)